Rosia Iraisam-pirenena Lalana Fitateram-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena>Fitaterana làlana iraisam-pirenena Russia
Entin'ny sohologiste ny entanao manerana an'i Shina avy eo dia ampitao any amin'ny Federasiona Rosiana amin'ny alàlan'ny seranan'i Hunchun, seranan'i heihe, seranan-tsambo suifenhe, seranan-tsambo manzhouli na amin'ny seranana Huoerguos any Xinjiang amin'ny alàlan'i Midwest kazakhstan amin'ny alàlan'ny Federasiona Rosiana miaraka amina fitoeram-boaty fitoerana na kamiao hafa.
Ny isan'ny lalana avy amin'ny seranan'i manzhouli mankany amin'ny tanàna Rosiana
CITY // STATION CITY // STATION STOD CODE AVY ANY MANZHOULI PORT
А Bazaikha (Krasnoyarsk) 892103 2600
А BATAREINAYA (Irkutsk) 932601 1500
Пр Pridacha (Voronezh) 597104 6400
Челябинск-груз. Chelyabinsk-entana. 800101 4900
Кострома-Новая Kostroma Vaovao 305100 6400
lamba Textilny 318401 6400
Faritra Volga Privolzhe 310607 6500
Kilometra Avy amin'ny seranan'i Khorgos ka hatramin'ny tanàna lehibe Rosiana
CITY / STATION CITY / STATION STOD CODE Avy amin'i Khorgos （KM)
Омск Omsk 831203 2000
Saint Petersburg Shushary(Saint Petersburg) 033004 4900
Chelyabinsk Chelyabinsk-entana. 800101 2600
Inona avy ireo karazan-tsakafo mety ho an'ny fiara fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?
Ho an'ny entana mitondra toe-javatra manaraka ireto:
A: Ny halavany na ny halavan'ny entana dia mihoatra ny halehiben'ilay fitoeran-javatra ary mihoatra ny fetran'ny gara isaky ny metatra toradroa misy cargos mavesatra.
B: Serivisy fiaran-dalamby izay tsy misy ny serivisy fanofana boaty.
C: Ny cargos dia mitaky fahatsiarovan-tena lehibe raha ny fitaterana lalamby kosa dia tsy afaka manome antoka ny tsingerin'ny fitaterana noho ny fitarihan'ny fiaran-dalamby sy ny fotoana fitaterana.
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanambarana momba ny ladoany, ny famindrana ny fomba amam-panao ary ny fahazoan-dàlana amin'ny fomba fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?
Amin'ny ankapobeny dia ireto manaraka ireto:
A. Ny fitaterana an-dalambe mankany Rosia dia ny hanatanteraka ny fanambarana fanondranana araka ny fampahalalana mifandraika amin'ny fiara fitaterana vahiny sy ny fomba amam-panao eo an-toerana rehefa avy mitondra entana any amin'ny trano fitehirizam-bokatra any amin'ny trano fitehirizam-bokatra.
C.Ny fitaterana làlana ara-làlana mankany Rosia dia azo ambara ao amin'ny seranan-tsoratry ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana na amin'ny toerana misy ny tetikasa.
Iza no mampiasa ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?
Ahoana ny momba ny volavolan-dalàna famoahana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Rosia?